Alahady 05 Desambra 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Publié le 5 décembre 2021 6 décembre 2021 par Hanitra ROBEL
Nisaotra an’Andriamanitra ny Mpitandrina noho ity fotoana ity.
Nankasitraka ireo Komity sy mpikambana eo anivon’ny FDL amin’ny fanantanterahana ny fanompoam-pivavahana. Nankasitraka ihany koa ny Mpitandrina Robel Bruno amin’ny fandraisana anjara amin’izao fanompoana masina izao.
· Niantso ny Fiangonana ho amin’ny fidirana ao amin’ny SEFALA.
· Niantso ny mpianakavin’ny finoana izay hiditra Katekomena. Ny faha 12 desambra izao no fidirana.
· Efa miroso amin’ny Voka-dehibe isika ankehitriny ka ny ivony dia ny andro Krismasy ny faha 25 desambra 2021 ho avy izao.
FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSIGERINANDRONY
Nisy ny fiarahabana ireo teraka volana novambra.
Ny Teny nentina niarahaba azy ireo dia araka ny hita ao amin’ny Salamo faha 16 and. 11:”Hampahafantatra ahy ny lalan’aina ianao; fa havokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay.”
Nisy ny rakitra teny amin’ny alitara masina nataon’ireo nahatratra ny tsingerinandrony. Niisa 54 ireo mpianakavin’ny finoana nanantanteraka izany.
Nisy ny fitondrana amim-bavaka azy ireo.
Ny hira 171 “Jeso, Mpanjaka malaza” and. 1 no notanterahina tamin’ny rakitra alitara.
Ireto no hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana: FFPM 171: 1; FF10:1.
· Tao ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny faha 85 taonany.
· Tao ny nankalaza an’Andriamanitra noho ny fitsingerenan’ny andro nahaterahany.
· Nisy ny nahazo asa fivelomana koa misaotra an’Andriamanitra.
· Teo ny nisaotra sy nidera an’Andriamanitra noho ny nahavitan’ny zanany ny “Mémoire Licence”.
· Renim-pianakaviana mahatsiaro ny fitahian’Andriamanitra ny ankohonany.
· Nisy ny nangata-bavaka ho amin’ny famindrampon’Andriamanitra, noho izay natao ka tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra.
· Nisy ny nangata-bavaka ho amin’ ny fitsaboam-pasalamana izay ataony.
· Nisy ny nanao raki-pisaorana noho ny fitahian’Andriamanitra ny tokantranony.
HIRA FANOLORANA NY RAKITRA
Ny hira FF 33: 3 « Inty aho Jesoa » no nanavaozana ny fanoloran-tena sy nanaolorana ny rakitra.
Ny hira mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia ny FF 27: 1, 2 “Ilay alim-pamonjena”.
Ireto kosa ny perikopa izay voalahatra hovakiana androany/ ny 1Samoela 2:1-5; ny Lioka 1: 18-25 ary ny Filipiana 4:4-9.
Ny Diakona Rakotoarisoa Faralahy no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.
Ny Diakona Rakotoarisoa Tanteraka kosa no namaky manontolo ireo perikopa voalahatra hovakiana androany.
Ny hira 68: 1 “Re tokoa ny feon’anjely” no nohirain’ny Fiangonana mialoha ny toriteny.
Ny Mpitandrina ROBEL Bruno no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Ny Lohahevitra vaovao izay entina hitaizana ny fiainam-panahin’ny Fiangonana, amin’ity volana ity, dia ny hoe “MINOA NY FIFALIANA AO AMIN’NY TOMPO”.
Mialoha ny nitoriana ny Teny dia mbola nitari-bavaka ny Mpitandrina, nametraka izao fotoana izao ho eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina.
Teo am-panombohana dia nanambara ny fifaliany ny Mpitandrina Robel raha nandray anjara amin’izao asa fanompoana izao ary nisaotra ny FDL amin’izany fiantsoana azy izany.
Ny Teny araka ny Filipiana 4:4a no nentiny nitondrana ny hafatra.
Raha nanao izao fanambarana izao i Paoly dia azo lazaina fa matoa izy milaza ny tokony hifaliana mandrakariva, dia nisy zavatra nahaketraka tao, ka dia ny fifaliana no entina handresena izany.
Traikefa koa izany satria i Paoly ihany no nianjadian’izany, ka izay nitranga tamin’ny fiainan’i Paoly eto no hambarany.
I Paoly dia tena nanenjika ny fivavahana kristiana, nefa rehefa lasa nitory an’ i Kristy izy, dia nanandratra avo ny fifaliana noho izany asa izany.
Ny epistilin’ny Filipiana no atao hoe epistilin’ny fifatorana, satria tany am-pigadrana i Paoly no nanoratra izao epistily izao.
Tanàna nandroso i Filipy ary tamin’ny dian’i Paoly faharoa, izany hoe tany amin’ny taona faha 49 na 50 tany ho any, no nandalovan’i Paoly tao.
Azo lazaina fa nandroso ny asa fitoriana ny Filazantsara tamin’ny nandalovan’i Paoly tao Filipy, ka dia fifaliana ho an’i Paoly izany.
Nisy anefa ny tsy faly tamin’izany, toy ny tamin’ny nandroahan’i Paoly ny demonia tamin’ilay zazavavy nataon’ny sasany ho fitadiavam-bola.
Fa inona tokoa moa azo hamaritana ny atao hoe fifaliana?
1 – MISY NY MIFALY SATRIA…
Misy ny mifaly satria nahazo fisondrotana; mifaly fa nihaona tamin’ny olona tsy hita ela.
Ny fifaliana eto dia hateraky ny fepetra, koa raha tsy feno ilay fepetra dia tsy tanteraka ilay fifaliana.
Misy koa anefa ilay antsoina hoe “FIFALIANA MIIBA”, izay fifaliana noho ny fahorian’ny hafa na fahavoazan’ny sasany.
Misy koa ny FIFALIANA MIABO, izay fifaliana raisina noho ny fahasoavana azon’ny hafa na ny fanambinana azon’ny hafa.
Misy ny fifaliana vokatry ny fivavahana amin’Andriamanitra.
Misy ny fifaliana noho ny zavaboaary sy ny fifampikasohana amin’ny natiora. Ny fahitana ny zavaboaary mahafinaritra manodidina dia efa miteraka fifaliana ho an’ny olona.
Ny fifaliana anefa raha tsy ao amin’ny Tompo dia very maina sy zavapoana ihany.
I Paoly dia maniraka antsika hifaly mandrakariva, izany hoe mifaly amin’ny fotoana rehetra ary mifaly amin’ny toe-javatra rehetra.
2- MISY NY MIFALY, NA DIA…
I Paoly, na dia tao an-tranomaizina aza, dia nanana fifaliana.
Izany no tena fiainana kristiana. Olona afaka mifaly na dia nohenjehina sy nohesoina aza.
Raha jerentsika ny Habakoka 3:17 -18“Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, Ary tsy misy voany ny voaloboka, Na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva, Ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, Na dia vonoina aza ny ondry ao amin’ny vala, Ary tsy misy omby ao am-pahitra, Nefa izaho dia mbola hifaly amin’i Jehovah ihany Sy hiravoravo amin’Andriamanitry ny famonjena ahy”.
FAMARANANA: “MIFALIA MANDRAKARIVA AO AMIN’NY TOMPO”
Misy mantsy ny fifaliana ao amin’ny Tompo, fa misy koa ny fifaliana tsy ao amin’ny Tompo.
Ny fifaliana ao amin’ny Tompo dia fifalian-tsy azon’iza n’iza hesorina amintsika. Marina fa misy fahoriana ety amin’izao tontolo izao, fa ao amin’i Kristy no manome ny fifaliana ho antsika.
Ny fiombonana ao amin’ny Tompo no fifaliantsika. Raha ao amin’ny Tompo isika dia hiara-manam-boninahitra Aminy isika.
Ny mahafaly antsika dia nomena fanomezana isika, dia ny nanomezana antsika Ilay Mpanavotra. Manana fifaliana maharitra isika.
Ho an’ny ray amandreny, ny fifaliany dia ny mahita fa mandeha amin’ny fahamarinana ny zanany.
Nanana ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena. Ny FFPM 273: He vokatra ny tany no nohirain’izy ireo tamin’izany.
Tamin’izany no nisaorana an’Andriamanitra noho ity fotoana ity. Nanehoana fa mila mifaly mandrakariva isika.
Nisaotra an’Andriamanitra noho ny mpianakavin’ny finoana nanantanteraka ny raki-pisaorana.
Taorian’ny hira faha 64: Injany hiran-danitra and. 1, 2 dia nambara ny Tondrozotra 2021 ary noraisina ny Tsodrano.
Ny hira 64, and. 3 no namaranana izao fanompoana masina izao.
Nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo taorian’izany.
Sary : Lovatiana Josian
Article précédentPrécédent Alahady 28 Novambra 2021
Article suivantSuivant Alahady 12 Desambra 2021